Thwebula NetInfo 8.9 – Vessoft
Internet, Inethiwekhi, Testing
NetInfo – isethi software zanamuhla ukuhlola ngiyosebenza inethiwekhi. Amathuluzi ukucinga izinkinga inethiwekhi, ukuvivinya ukusebenza kanye eya host, ukucinga igama by-ikheli le-IP, hlola ukuthembeka amakheli imeyili ayatholakala umsebenzisi. NetInfo kwenza ukubuka ulwazi mayelana uxhumano enethiwekhi iseva lapho uxhumano senziwa. Futhi zikhona amathuluzi ukunikeza umsebenzi elikhiqizayo + ephephile inethiwekhi. NetInfo ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Inani elikhulu amathuluzi inethiwekhi
Ukucinga zezinkinga inethiwekhi
Ukuqapha umthamo ukusebenza Sebawoti ethize
Umsebenzi Secure in the network
Amazwana on NetInfo:
NetInfo Ahlobene software:
Inethiwekhi Internet Isofthiwe ukuhlomisa ebhodini lokunamathisela. Futhi isofthiwe kushintshe idatha ngokusebenzisa inethiwekhi wendawo noma internet.
English, Українська, Français, Español... NetWorx 6 Standard
Testing Internet Imenenja internet traffic. Futhi isofthiwe kwenza ukuba ulungise ijubane ukudluliswa kwedatha futhi uqaphe uxhumano lwe-inthanethi.
English, Українська, Français, Español... Hamachi 2.2.0.541
Inethiwekhi Internet Isofthiwe ukudala isengezo senethiwekhi ezimele phakathi computer nge internet. Ezahlukahlukene ukubethela ubuchule ezisetshenziswa ukuhlala ngivikelekile inethiwekhi wendawo.
English, Français, Español, Deutsch... Wireshark 2.2.3 Standard futhi Portable
Testing Inethiwekhi Ithuluzi ivivinya uxhumano enethiwekhi izicelo. Isofthiwe ubonisa ulwazi mayelana Izivumelwano abasemazingeni ahlukahlukene.
Inethiwekhi Internet Imidlalo The popular phakathi gamers emulator inethiwekhi yendawo. Isofthiwe iqinisekisa ukuxhumana okuphephile nabanye abadlali futhi ine amathuluzi amaningi ukwenza kwamukeleke.
English, Français, Deutsch, Italiano... HWMonitor 1.30
Testing Ithuluzi ukuqapha isimo izingxenye ezihlukahlukene computer. Isofthiwe uyakwazi ukubonisa zamanje, maximal futhi sakugcina voltage value yezingxenye computer.
Internet Ukubethelwa Isofthiwe for the ukuvakashelwa lemfihlo amawebhusayithi on the internet. Isofthiwe isekela ubuchwepheshe ekhethekile ukuthi encrypts ukudluliswa kwedatha nolwazi kusuka besithathu.
Internet Ithuluzi elinamandla ukubamba amaphakethe inethiwekhi. Futhi isofthiwe has imisebenzi iphakethe zokuhlunga futhi isekela izinhlelo ezikude iphakethe ukuthunjwa.
Testing Isofthiwe ukuqoqa ulwazi mayelana video ikhadi, processor, ihluzo ikhadi kanye nezinye izingxenye. Isofthiwe kwenza ukubuka futhi avivinye umthwalo phezu ihluzo iprosesa.
Internet Ukubethelwa Isofthiwe ukufinyelela website ivinjiwe futhi ukuvimbela imingcele internet. Futhi isofthiwe kwenza ukuvikela akhawunti yomsebenzisi bese amaphasiwedi ngokumelene Nokugenca.
Hambayo Isofthiwe ukudlulisa idatha futhi uphathe amafayela takhiwo ehlukahlukene kusukela namadivayisi akude ngokusebenzisa ubuchwepheshe obungenawaya nefu.
English, Français, Español, Deutsch... Nymgo 5.5.26
Ukukhulumisana Voice Isofthiwe ukubiza abantu ucingo nganoma iyiphi ingxenye yale planethi. It isekela ubuchwepheshe esikhethekile a izinga ukulahlekelwa sakugcina zokuxhumana ngezwi.
English, Français, العربية
Graphics and design Ithuluzi esikahle ukusebenza nge-3D. Isofthiwe sihlanganisa amathuluzi anhlobonhlobo for the yokwakheka nokulandelana kudalwa isiqophi imidlalo.
English, Українська, Français, Español... Camtasia Studio 8.6.0.2079
Screen bamba Isofthiwe ekulobeni izenzakalo lapho zenzeka kuyi-computer yakho. Futhi isofthiwe kwenza ukwengeza imiphumela ehlukahlukene kanye umsindo amavidiyo.
Samsung Kies 3.2.16084.2 futhi 2.6.4.16113
Teamviewer 12.0.72365 Standard, QuickSupport futhi Portable